7 Kacha oké ọnụ Places Iji Njem Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Kacha oké ọnụ Places Iji Njem Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 02/07/2021)
Offọdụ n'ime ihe ndị mara mma echiche na Europe bụ ọnụ na dị mfe iru. Otú o sina dị, njem na Europe nwere ike ịdị oke ọnụ ma ọ bụrụ na ị naghị ezube tupu oge eruo. Ọ bụ ezie na ọtụtụ isi obodo Europe ga-agbatị mmefu ego njem gị, e nwere nnọọ ole na ole ebe njem na Europe na-kpam kpam ọnụ. Ugwu anyi 7 ọtụtụ ọnụ ebe njem na Europe bụ kpam kpam mmefu ego-enyi na enyi na agaghị gafere € 50 a ụbọchị kwa onye.
Ihe ndị a zoro ezo adịghị ada n'azụ mara mma na anwansi, karịa obodo ndị dị ka Paris na Berlin.
Okporo ígwè iga bụ ihe kasị environmentally friendly ụzọ njem. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. Ọtụtụ Ebe Ahịa Ahịa Na Europe: Cologne, Germany
Ọ bụ ezie na Germany dị oke ọnụ, Cologne bụ otu n'ime ihe ndị kasị oké ọnụ ebe ileta na Europe. Si mmefu ego-enyi na enyi ulo free akara ngosi akara ngosi na ọnụ ala njem, Cologne bụ n'ezie a nnukwu ezumike obodo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị naanị gị ma ọ bụ na-eme atụmatụ njem Euro ezinụlọ.
Obodo German a bụ ebe obibi Kolsch biya, yabụ ị nwere ike detụ nri ụtọ German naanị € 1.30. Onweghị ihe dị mma karịa ịnụ ụtọ pint n’akụkụ osimiri Rhein mara mma, mgbe otu ụbọchị gachara n'obodo. Jide n'aka na ị gafere Ficshmarkt maka kaadi-dị ka snaps na ụlọ ndị mara mma ma gaa n'ihu na Old Town, Altstadt.
Na mgbakwunye, na akara ama ama na Germany, a magburu onwe Cologne katidral bụ free ileta. Ya Gothic ije, ese windo enyo, na echiche nke osimiri bụ The Epic. Ọ bụrụ na ị hụrụ nka n'anya, mgbe ahụ Cologne nwere nnukwu ihe ngosi nka ma ọ bụ nkà n'okporo ámá na Ehrenfeld. Mpaghara a bụ hip na trendy nke Cologne, na-aga-ebe maka kọfị na Devid agụghị ndị gbara.
Dị ka ị pụrụ ịhụ Cologne bụ ihe ịtụnanya mmefu ego-enyi na enyi obodo njem na Europe. Karịsịa ihe nile, ihe kacha mma banyere ya bụ ya oru oma na oké ọnụ iga. Transportgbọ njem German, ụgbọ okporo ígwè, na tram bụ nnọọ mma na oru oma, ya mere, ọ na - echekwa gị oge dị ukwuu ịgagharị. Inweta a ụgbọ okporo ígwè kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu bụ oké ụzọ zọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị.
Berlin na Aachen Zụọ Ahịa
Frankfurt na Cologne Zụọ Ahịa
Dresden na Cologne Zụọ Ahịa
Aachen na Cologne Zụọ Ahịa
2. eji, Belgium
Waffles maka nri ụtụtụ na ị dị njikere inyocha niile 80 àkwà mmiri na ọdọ mmiri nke ịhụnanya, Minnewater. Bruges na-bụ magburu onwe ochie obodo na Belgium na otu n'ime ihe ndị kasị oké ọnụ ebe ileta na Europe. Site na ọnụ ọgụgụ pụtara ìhè nke nnukwu ụlọ na a ụgbọ mmiri na canals, e nwere ọtụtụ nke oké ọnụ ihe na-eme na Bruges, a ụgbọ okporo ígwè si Brussels.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịbelata ntakịrị, mgbe ị ga-hoo haa na-ewepụta oge na a akụkụ nke gị kwa ụbọchị mmefu ego na chocolate. Chọọ maka akara aka ‘ejiri aka mee 50 nke ụlọ ahịa chocolate na obodo maka kacha mma Belgium chocolate.
Bruges ’small size and city planning are super mfe inyocha on ụkwụ, yabụ na ị gaghị ewepụta oge na njem. N'ezie, ụzọ dị mma iji chọpụta obodo ahụ ma mụta banyere ọdịbendị ya na ihe nketa ya bụ isonye na njem ịgagharị n'efu. Zọ a ị ga - enweta ndụmọdụ niile banyere ụlọ nri dị ọnụ ala, ihe ncheta, na ụzọ kachasị mma isi gaa na ebe nkiri kachasị.
Amsterdam ka Bruges Zụọ Ahịa
Brussels ka Bruges Zụọ Ahịa
Antwerp na Bruges Zụọ Ahịa
Ghent ka Bruges Zụọ Ahịa
3. Ọtụtụ Ebe Ahịa Ahịa Na Europe: Czech Krumlov, Czech Republic
Czech Republic bụ otu n'ime ebe kachasị ọnụ ala ịga njem na Europe, ma si otú ahụ ọmarịcha obodo nke Cesky Krumlov bụ na anyị na ndepụta. Obodo a mara mma bụ njem-enyi na enyi na karịa ihe niile, mmefu ego. Ga-ahụ ya dị mfe ịchọpụta ma tinye onwe gị na nri Czech, biya biya, na nlegharị anya mgbe ị na-etinye ihe ọ bụla site na mmefu ego gị.
Na mbụ, Iri nri dị oke ọnụ ala, ma ị nwere ike ịchọta menu nri ehihie dị ukwuu na-enye mmalite, isi N'ezie, na biya maka ọnụ ọchị. Beer dị ọnụ ala karịa mmiri niile na Czech Republic ma jikọta ya na sausaji ndị a ma ama, i nweela onwe gị ezigbo nri abalị.
Obodo ahụ bụkwa ebe obibi nke ọmarịcha ụlọ na ubi ndị nweere onwe ha ịbịa, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịgo maka echiche ndị epic, mgbe ahụ ọnụ ụzọ ego ụlọ elu ahụ erughị 5 euro. Ọzọ dị ukwuu nhọrọ inyocha obodo bụ isonyere a free na-eje ije tour na izute ndị ọzọ njem ma ọ bụ akwụkwọ a Cesky Krumlov onwe obodo ije ije maka òtù. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịchọpụta ihe nzuzo nke obodo ahụ, akụkọ mgbe ochie, na ndụmọdụ iji nwee njem dị ịtụnanya na akụkọ ifo.
Nuremberg ka Prague Zụọ Ahịa
Munich na Prague Zụọ Ahịa
Berlin na Prague Zụọ Ahịa
Vienna na Prague Zụọ Ahịa
4. Eger, Hungary
Hungary bụ otu n'ime mba ndị dị ọnụ ala na Europe, na enwere otutu ihe karie Budapest. Eger bu obodo oma, ya na isi iyi oku, Bukk Hungary’s National park, na akara ngosi mara mma ileta. Ihe ebube niile a dị na-enweghị imebi ego gị.
Eger bụ otu n’ime obodo ndị a ma ama na Hungary ma nwee ezigbo mmanya na-acha ọbara ọbara, dị n'etiti ugwu Bukk. Ihe ngosi echiche ndị sitere n'okike na-eme maka ọnọdụ zuru oke maka wine akatabi okop mgbe ị gachara njem nlegharị anya na ogige Bukk mara mma ma zuru ike na mmiri iyi. Dị ka Hungary bụ n'ụlọ ka ụfọdụ ndị kasị mma eke iyi na Europe, sook ke thermals bụ kpam kpam kwesịrị.
Eger zuru oke maka izu ike izu ike izu ike si Budapest. Nhọrọ n'etiti njem-ubochi ma ọ bụ nkwụsịtụ obodo si Budapest bụ nke gị niile, ma anyị na-akwado na-emefu dịkarịa ala a ogologo izu ụka a enchanting obodo.
Vienna na Budapest Train Prices
Prague na Budapest Ahịa Ahịa
Munich na Budapest Train Prices
Graz na Budapest Pzụ Ahịa
5. Ọtụtụ Ebe Ahịa Ahịa Na Europe: Cinque Terre, Italy
Houseslọ ndị na-egbuke egbuke, na-anọdụ ala na Sentiero Azzurro mara mma, eme ka Cinque Terre bụrụ onye ụkpụrụ ụlọ nke Italiantali. Cinque Terre bụ otu n'ime ebe kachasị ọnụ iji njem na Europe na Italytali. Onweghị ihe ejiri ya tụnyere mmetụta nke ịgagharị n'ụzọ dị nkasi obi na ọsịsọ 5 ntụpọ pụrụ iche. Wayzọ a nke ịgagharị na-azọpụta gị nnukwu oge na ego na kaadi ụgbọ oloko Cinque Terre.
Banyere ebe obibi, na-eme La Spezia gị isi n'ihi na njem bụ oké nhọrọ. Ọ bụ obodo mara mma n’ọdụ ụgbọ mmiri Italiantali nke nwere ọtụtụ gọọmenti rụrụ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ịhọrọ.
Cinque Terre na-arụsi ọrụ ike ma dị oke ọnụ n'oge nnukwu oge. Ya mere, ọ kacha mma ileta n'etiti Eprel-June maka oge okpomọkụ ma ọ bụ Ọktoba-Nọvemba iji nwee mmasị na ịma mma ya na ọdịda.
La Spezia na Riomaggiore Zụọ Ahịa
Florence na Riomaggiore Zụọ Ahịa
Modena gaa Riomaggiore Zụọ Ahịa
Livorno gaa Riomaggiore Zụọ Ahịa
Ebe obibi ka Mozart, Baroque ije, Schonbrunn Obí, na ndu ndu-ya, Vienna bụ chi. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike ịsị na ọ dị ọnụ, njem na isi obodo Austrian bụ ihe a na-eme kpamkpam ma ọ gaghị adaba na mmefu ego njem kwa ụbọchị na isi obodo Europe ndị ọzọ dị ka Prague ma ọ bụ Budapest. Obodo a bu ezigbo njem, ya mere ị nwere ike ịmasị ọdịbendị bara ụba, nri, na amara nke ndụ Viennese, n’emebighị ndụ gị ego.
The Austrian isi obodo bụ otu n'ime ihe ndị kasị oké ọnụ ebe ileta na Europe, ekele maka azụmahịa ndị njem nleta ya. Ọmụmaatụ, na Vienna Kaadị ga-enweta gị nnukwu ego na Museums, nkiri, na ọha iga. Na mgbakwunye, ị pụrụ ịnụ ụtọ kasị mma Viennese strudel na ụfọdụ nke Vienna si ịtụnanya ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ, n'oge nri ehihie. Ọtụtụ ụlọ oriri na ọ cafụ andụ na cafes na-enye a 2-3 N'ezie setịpụrụ menu n'okpuru € 10.
Maka otu abalị site na ọdịbendị na egwu, ọtụtụ cafes nwere egwu ndụ egwu n'efu. ma, ma ọ bụrụ na ị nwere anya gị enịm ke okoneyo ke ọwọrọetop opera, mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ị na anya gị na-tiketi maka a guzo arụmọrụ, ebe ọ bụ na ha dị oke ọnụ ala karịa tiketi opera ochie.
Salzburg na Vienna Zụọ Ahịa
Munich na Vienna Zụọ Ahịa
Graz ka Vienna Zụọ Ahịa
Prague na Vienna Zụọ Ahịa
7. Ọtụtụ Ebe Ahịa Ahịa Na Europe: Normandy, France
Ọdọ mmiri, akụkọ banyere Joan nke Arc nke Ruen, agwaetiti Mont St.. Ebe obibi ndị mọnk Michel, bụ nanị ole na ole n'ime bara nnukwu uru na Normandy. Ọmarịcha mpaghara a bụ njem were awa abụọ site na Paris, ma n’adịghị ka isi obodo France, ọ bụ otu n'ime ebe kachasị ọnụ iji gaa France.
Normandy kacha mara amara maka ọdịda mmiri si WWII. Otú ọ dị, ọ bụ ebe obibi ugwu dị na Etretat, nke nnukwu nkume nzu, ihe omimi di egwu. Scenic Giverny village ebe Claude Monet bi na ese ndị a ma ama lili bụ ebe ọzọ ịghara ịhapụ gị njem Normandy.
ikwubi, ejegharị ejegharị na Europe pụrụ ịbụ nnọọ oké ọnụ njem. Normandy, Cinque Terre, Vienna, Eger, eji, Cologne, na Cesky Krumlov, bụ 7 ọnụ ọnụ njem iji gaa Europe. Ndụmọdụ anyị ga - egbochi gị ịchekwa ndụ gị n'otu ezumike ma hụ na ị nwere njem kwesịrị ncheta na njem pụrụ iche.
Paris na Rouen Zụọ Ahịa
Paris na Lille Train Ahịa
Rouen ka Brest Zụọ Ahịa
Rouen ka Le Havre Zụọ Ahịa
ebe a na Save A Train, anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi ezumike gị na ụgbọ oloko kacha dị ọnụ ala na Europe.
You chọrọ Embed anyị blog post “7 Kacha oké ọnụ Ebe Iji Njem Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https:// www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ja na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
njem dị ọnụ ala mmefu ego cheaptravel Czech Republic TrainTravelBelgium TrainTravelHungary travelfrance travelgermany
Ejegharị Iji Strasbourg Site Train